Indian Police na na Oke kaadị dabeere Ponzi Scheme
The Ponzi gụnyere ọtụtụ omume site a dr. Amit Lakhanpal, CEO nke Money Trade Mkpụrụ ego Group na CMD nke Flintstone Group. Ọchịchị kwuru na Lakhanpal kere a cryptocurrency akpọ Money Trade Mkpụrụ ego (MTC), nke o kpamkpam ahịa na nabatara umu Indian obodo iji rata investors n'ime ọzọ ada amụọ. An ụlọ ọrụ dị na Orion Business Park ekesịpde site na Flintstone Group ezigbo ala na ụlọ mmepe gị n'ụlọnga kwuru na-abụ “na etiti nke wayo” na ndị ọrụ ya orchestrating ọtụtụ n'ime ndị a fraudulent scams; The unsuspecting investors “iri na iri na iri abụọ ugboro dị nnọọ anọ ọnwa isii,” akọ Times Of India. E kwukwara na ụfọdụ investors ọbụna kwere nkwa Caribbean amaala, ezigbo ala na ụlọ na Switzerland akụ akụkọ n'ọnọdụ ha ego.
Ọ na-eme atụmatụ na-eme atụmatụ ego akwụ a n'ozuzu Ponzi usoro bụ mkpokọta 500 crore, nke ewere ka $ 6,699,450,000.
N'oge na na, na Thane uwe ojii jidere na jidere Taha Kazi, otu n'ime ndị isi flanking technicians, ma ka na-achọ Lakhanpal na anọ ndị ọzọ na igodo ọnụ ọgụgụ nke wayo.
The Ponzi e nyochaworo site ọchịchị obodo ahụ na-esonụ a mkpesa si Delhi si Managing Director Pravin Agarwal mgbe na-anata dịghị payouts si ụlọ ọrụ. Deputy Chief of Police Abhishek Trimukhe kwuru:
“Anyị dere mpụ na Chitalsar Police Station, ebe na-azara ọnụ ahịa a cryptocurrency mkpụrụ ego, na-aghọgbu ọtụtụ ndị mmadụ.”
Kemgbe ahụ, ndị uwe ojii ugbu a na eze nyere a “bụrụ na nke wayo, ekperima imebi, forgeries na ndị ọzọ na mkpa ebe nke IPC, na mgbakwunye na nke Maharashtra Iwu maka Nchedo nke Nwere mmasị Investors, 1999, na kwa n'okpuru Ozi Technology Act”.
Ezie na ọ ka amaghi ebe a Ponzi usoro metụtara ebe, ndị uwe ojii akụkọ na a abụọ wakporo ga-ebe ọzọ ụlọ ọrụ dị na Kailas Industrial Park, Vikhroli.
Mgbe nke a odida, ọtụtụ ugbu a kwere na a ojoro bụ akụkụ nke a ukwuu ibu Ponzi arụ ọrụ nke Dubai. Ọ na-adịbeghị anya a kọrọ na Lakhanpal esesịn partnered Ya Onye nwem Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum si Cabinet na-etolite “Al afa Group,” a ọhụrụ Dubai dabeere Diamond-kụziri kaadị mmalite. Ọ Aims ike blockchain akụ na na-edebe na bara nnukwu uru na ike ga-ahịa site na-ụlọ mgbanwe. Ọ na-enye nsogbu na Al Kasir Group esesịn ulo oru ya “Nga mbụ Blockchain Asset Ịchụ” site Al Kasir Group portal, nke na-adọta ego. Ma na-ekwu na nke a bụ eziokwu na nne Ponzi na-ntà Nelly, anọgide na-hụrụ.
Kraken Daily Market Report maka 05.06.2018
$158M ahịa gafee ahịa niile taa
Onye bu ihe agha agha na t ...